वाग्मती हाम्रो सभ्यता हो, यसलाई बचाउनु पर्छ | RevoScience Nepali
Home /वाग्मती हाम्रो सभ्यता हो, यसलाई बचाउनु पर्छ
वाग्मती हाम्रो सभ्यता हो, यसलाई बचाउनु पर्छ
पिता स्व. मिनानाथ अर्याल र माता मायादेवी अर्यालका पुत्र डी. पी.अर्याल सामाजिक क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो । ‘वाग्मती हाम्रो सभ्यता हो, यसलाई बचाउनु पर्छ’ भन्दै विगत देखि वर्तमानसम्म खटिरहनुु भएको अर्यालको जन्म वि.सं.२०२१ सालमा धादिङ् जिल्लाको ढोला गाविसमा भएको थियो । अंग्रेजीमा स्नातक र संस्कृतमा शास्त्री गर्नुभएको अर्याल वाग्मती सरसफाइ बोर्डको सदस्य तथा नेपाल नागरिक समाजको महासचिवको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
वाग्मती सरसफाई अभियान सय हप्ता पुगेको अवसरमा वाग्मती सफाइ अभियानमा केन्द्रित भएर समाजसेवी डी.पी. अर्यालसँग रिभोसाइन्सले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
वाग्मती सरसफाई अभियानमा कसरी जोडिनु भयो ?
अधिकार सम्पन्न एकिकृत वाग्मती सभ्यता विकास समिति फेरीदै आएको नाम हो । वाग्मती हाम्रो सभ्यता भएकाले एकिकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिमा जोडीएर काम गर्ने रहर पहिल्यै देखि थियो । विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हुनाले म वाग्मतीमा बसिदिएर काम गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको चाहना थियो । त्यसरी म वाग्मतीमा जोडीए । म मात्रै होइन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी सवै वाग्मतीसँग जोडिएको हुनाले यसको संरक्षण गर्नु हामी सवैको कर्तव्य हो ।
अर्को कुरा वाग्मती सफाइमा स्थानीय मानिसहरूको पनि निकै उत्साह पूर्ण सहभागीता भएको कार्यक्रममा आफु जोडिन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ । त्यस्तै, नागरिक समाज जस्तो संस्थामा रहेर काम गरेको कारण र विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामा पनि सक्रिय रूपमा विगत देखि वर्तमानसम्म काम गरिरहेको हुनाले बुद्धि जीवी वर्गले मलाई वाग्मती सरसफाइ वोर्डमा बस्न अनुरोध गरेका हुन् । यहाँ रहेर मैले आफ्नो भूमिका यथासक्य निभाउने कोसिस गरिरहेको छु । हुनत यस संस्थामा जोडिने चाहना धेरैलाई बढेको थियो । वाग्मतीमा आएर राम्रो काम गरौं भन्ने धारणा कसैको थियो भने यहाँ आएर सेवा नगरी मेवा खोज्ने मानिस पनि नभेटिएको होइन । यस्ता खाले प्रवृत्ति भएका साथीहरूको हावी भयो भने धेरै जसो काम सफल नहुने र काममा ढिलाइ हुने मात्र नभइ समग्र देशले ठूलो घाटा व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । त्यसैले हामीले त्यस्ता साथीहरू प्रति संधै सचेत नै रह्यौं । मेरो जीवनकाल खण्डभरी वाग्मती प्रति मेरो सद्भाव र अपार माया रहनेछ ।
नागरिक समाजको जन्म कसरी भयो ? यसले वाग्मती सफाइमा कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
नागरिक समाज भनेको मन्दमन्द भएका नागरिकका आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने सामाजिक संस्था हो । यसले जनताको हितमा विभिन्न विषयहरूलाई उठान गरेर सरकार समक्ष पु¥याउने काम गर्छ । नागरिक समाजले वाग्मती सफाइ सम्बन्धि पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रि हुँदा रूक्माङ्गत कटुवालको विषयमा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्री ठिक कि राष्ट्रपति ठिक चुनेर ठुलै बहस भयो । राष्ट्रपतिको प्रक्रियाबाट नगएर व्याकडोरबाट प्रधानमन्त्रिले काम गर्न खोजेकाले उनी त्यसमा असफल पनि भए । तर त्यो वेलाका कृष्ण पहाडी जस्ता मानव अधिकार कर्मीहरूले पनि प्रधानमन्त्री कार्यकारी भएकाले प्रक्रियामा जानु आवश्यक छैन भनेर नारा जुुलुस गर्न थाले । नागरिक अगुवाको नाममा उनीहरू गएकाले हामीलाई त्यो चित्त बुझेन भने अर्को कुरा लोकतान्त्रिक पद्धतीमा हरेक कुरा विधिमा चल्नुपर्छ । त्यतीमात्र नभएर सपथ ग्रहण गर्नेवेलामा उपराष्ट्रपतिले आफ्नो मैथली भाषा वाहेक अन्य भाषा नभन्ने भनेपछि हंगामा मच्चियो । यस्ता गतिविधीहरू भएपछि वास्तवमा नागरिकको आवाज बोल्ने संस्थाको खाँचो छ भन्ने आवश्यकता ठानेर नागरिक समाजको जन्म भयो ।
हाम्रो यस नागरिक समाजको जन्म हुन भन्दा अगाडि नागरिक समाज त थियो तर त्यो व्यक्ति परक थियो । नागरिक समाज स्थायीत्व र पारदर्शिता नभएकाले नागरिकको आवाज बोल्नको लागि हामीले अर्को नागरिक समाजलाई जन्म दियौं । अहिले निरन्तर रूपमा नागरिक समाजले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । नागरिक समाजले प्रत्येक वर्ष आफ्नो गतिविधि सहित स्मारिकाहरू प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
हरेक वर्ष महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्दै आएको यस नागरिक समाजले वाग्मती सरसफाइ अभियानमा पनि निकै ठूलो योगदान पु¥याएको छ । हामीले विभिन्न समयमा स्थानीय बासीहरूलाई वाग्मती सफाइ सम्बन्धि चेतना दिने खालको कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौं । हामी आफैं पनि धेरै जसो वाग्मती सफाइमा व्यस्त हुने गरेका छौं । वाग्मती आमनागरिकको चासोको विषय बनेको छ । आउदा दिनहरूमा पनि वाग्मतीलाई बचाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने योजना नागरिक समाजको रहेको छ ।
वाग्मती सफाइको मुख्य योजना कसरी बन्यो ?
वाग्मती बचाऊ अभियानका पहिलो अध्यक्ष विदुर पौडेलले धेरै संघर्ष गरेर वाग्मतीको दर्दलाई उजागर गर्ने काम गर्नु भएको थियो । वाग्मती बचाउनको लागि वाग्मती सरसफाइ अभियान पहिला देखि नै भइरहेको थियो । लिलामणि पौडेल जी वाग्मतीमा जोडीनु भन्दा अगाडि नै हामी सात सय जना मिलेर तिलगंगा देखि गुह्येश्वरी स्कुलसम्म सफाइ गरिसकेका थियौं । हामीले त्यतीवेला राष्ट्रपतिबाट वाग्मती सफाइ कार्यक्रमको उद्घाटन गराएका थियौं । पछि वाग्मती सभ्यताको महत्वलाई बुझेर लिलामणि पौडेलले वाग्मती सफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिनु भयो । म यस्ता सामाजिक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रूपले लागेको थिए । त्यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै संघ संस्थाहरूले वाग्मती सफाइको अभियानमा काम गरिसकेका थिए र गरिरहेका पनि छन् । अहिले वाग्मतीको बागद्वारदेखि भिमसेन गोला पुलको छेउसम्म अत्यन्तै सुन्दर पार्क बनाउने योजना छ । सवै निकायको चासो भएकाले नै यो सम्भव भएको हो ।
वोर्डको कार्य चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ नि !
वाग्मती देशको चासोको विषय भएकाले सरकारले चासो देखाउनु स्वभाविक थियो । वाग्मतीको बागद्वार देखि चोभारसम्मको क्षेत्रलाई प्रदुषण मुक्त बनाउनको लागि पहल भयो । लिलामणि पौडेल नेपाल सरकारको मुख्य सचिव भएकाले वाग्मती सफाइ कार्य अझै सहज बन्न पुग्यो । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको नेतृत्व क्षमता असाध्यै राम्रो छ । तर पदभन्दा बाहिर आएपछि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्नु हुन्छ कि सक्नु हुँदैन थाहा छैन । अहिले राम्रोसँग कार्य सम्पादन भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले वाग्मतीको नाममा संस्था खोलेपछि त्यसको नेतृत्व गरेर सवै निकायले त्यसलाई सहयोग गर्नुको सट्टा संस्थाका गतिविधिहरूलाई विभिन्न कोणबाट हेर्दा निष्क्रिय भएको जस्तो पनि देखिन्छ । दुर्भाग्य शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बोर्ड भएपनि शहरी विकास मनत्रालयले निरन्तर रूपमा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न सकेको छैन । वर्ष दिन भैसक्दा पनि आपसी मनमुटाव र पदको कारण एउटा पनि मिटिङ् भएको छैन । तर एकिकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिले निरन्तर रूपमा आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारी स्तरमा नै वाग्मती प्रति चासो हुनुको कारण के हो ?
वाग्मती हाम्रो पहिचान भएकाले सरकारी निकायले चासो देखाउनु अति आवश्यक थियो । वाग्मतीको सम्पति अतिक्रमण हुन नदिएर जोगाउनु सरकारको दायित्व हो । किनकी वाग्मती आमनागरिकको मात्र नभई राष्ट्रकै अमुल्य सम्पति हो । यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारलाई सवैले अनुरोध गरेपछि वाग्मतीले संरक्षण पाउने आषा जागेको हो । तर सरकारी निकायको आधिकारीक कार्यक्रम गरेर सय हप्ता पुगेको भने होइन । लिलामणि पौडेलको स्वतस्फुर्त रूपमा सहभागीताको काराण मन्त्रालयका विभिन्न एकाइहरूले यो विषय वातावरण र सरसफाइसँग सम्बन्धित छ भनेर स्थानीय संघ संस्था, विद्यालय तथा महाविद्यालयहरूलाई परिचालन गर्दिन अनुरोध गर्दै चिठ्ठी लेखेर पठाएका थिए । यस महान कार्यमा सरकारी स्तरका धेरै पदाधिकारीहरू सामेल भएका छन् ।
वाग्मतीको मुख्य मुद्दा स्थानीय मानिसलाई वाग्मतीसँग सम्बन्धित गराउन खोज्नु हो भने वाग्मतीमा फोहोर फाल्न हुँदैन भनेर सचेत गराउनका लागि हो । अहिले वाग्मतीमा फोहोर फाल्दैनन् किनकी आमनागरिक यस्ता कार्यक्रमहरूले गर्दा सचेत भैसकेका छन् । जो मान्छेसँग इच्छा सक्ति, नेतृत्व क्षमता र समय छ यसको सदुपयोग लीलामणि पौडेलले गर्दिनु भएको छ । अन्य सरकारी निकायहरूले पनि यस्ता कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न जरूरी छ ।
वाग्मती प्रति मानिसहरूको पहिलेको चेतना र अहिलेको चेतना स्तरमा के फरक पाउनु भयो ?
मानिसको पहिला र अहिलेको चेतना स्थरमा धेरै परिवर्तन आएको छ । पहिलाको वाग्मती र अहिलेको वाग्मतीको अवस्थालाई मुल्याङ्कन गर्दा पनि यो कुरा सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । वाग्मती सफाई अभियानको प्रभावले गर्दा अहिले कसैले पनि वाग्मती नदीमा फोरफाल्ने दुष्साहस गर्न सक्दैनन् । यहाँका मानिसहरूमा वाग्मती हाम्रो सभ्यता हो र यसलाई हामीले बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने मानसीकताको विकास भैसकेको छ । वाग्मतीसँग नजिक रहेर काम गर्ने संस्थाहरूले पनि मानिसहरूलाई वाग्मती फोहोर हुनु भनेको हामी आफैं फोहोर हुनु हो भनेर चेतना जगाउने खालका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छन् । स्थानिय संघ संस्थाको सक्रियता र मानिसहरूको चासोको कारण वाग्मती सफाइमा सहयोग पुगेको छ । तर यती हुँदाहुँदै पनि अभिष्ट पुरा हुँदैन ।
बालबालीका देखि वृद्धहरूको चेतना स्तर समेत वागमती सम्बन्धि सकारात्मक रहेको छ । वाग्मतीको क्षेत्रमा सागहरू लगाउने अर्थात आफ्नो नीजि कामहरू गर्ने मानिसहरू पनि अहिले हच्किएका छन् । उनीहरूलाई हामीले धेरै पटक वाग्मतीको किनारमा फुल तथा बोट विरूवा लगाउने हो भनेका छौं । नदी किनारमा लगाएका प्राय सवै बाँसहरू हामीले उखेल्यौं । सम्झाउन कोसीस गर्दा कतिपय स्थानीय सुरूसुरूमा अचाडु हुन खोज्नु भयो । पछि राम्रोसँग बुझनु भयो । अहिले सामान्य मानिसमा पनि चेतना जागेको छ र उलेख्य मात्रामा सहभागिता पनि छ । वाग्मती सरसफाइमा लागेका कामदारहरूलाई सवै सुविधा तथा तलवहरू दिइएको छ । सरकार परिवर्तनको कारणले र स्वार्थको कारणले गर्दा कतिपय कुराहरू नमिलेको अवस्था पनि छ ।
वाग्मतीको किनारमा रहेका प्लाष्टीकहरू टिप्ने तर वाग्मतीमा मिसाइएको ढल तथा विभिन्न मिसावटहरूको व्यवस्थापन नगरी वाग्मतीले पुर्नजीवन पाउँछ ?
पहिला प्लाष्टिक नै प्लाष्टिक जमेको थुप्रो देखिने एवं प्लाष्टिकको भुमरी चल्ने वाग्मतीमा अहिले पहिलाको जस्तो अवस्थामा छैन । अधिकार सम्पन्न एकिकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिले ढल विकासको कार्य पनि गरिरहेको छ । वाग्मतीको किनारमा पार्क बनाउको लागि स्थानीय संघ संस्थाहरूलाई जिम्मेवारी दिऊँ भनेर मैले मिटिङ्मा राखेको प्रस्ताव पारित भयो । त्यही प्रस्ताव अनुसार समितिले विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई सम्झौता गरेर जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । कतिपय ठाउँमा पार्कको विकास भएर फुलहरू फक्रिरहेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
वाग्मती किनारमा रहेका प्लाष्टिकहरू टिप्दैमा वाग्मती सफा हुन सक्दैन । किनकी वाग्मतीमा मिसाइएको ढल र विभिन्न उद्योगबाट निष्केको मिसावट साथै वाग्मतीको मुहान सफा गर्न अति जरूरी छ । विस्तारै यस्ता कुराहरूको पनि व्यवस्थापन हुँदै जानेछ । बाबुराम भट्टराईले किनाराको बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न प्याकेज सहित नटेर्नेलाई पनि निकै बुझाउनु भएको थियो । भट्टराईको यस कामलाई देश भरिबाट सह्राना आएको थियो । तर त्यो सत्तामा रहनुजेल मात्र हुँदोरैछ ।
मलाई याद छ, म सानो छंदा दाईसँगै वाग्मतीमा आउने र त्यहीं नुहाउने गथ्र्यौं । यसैक्रममा मेरो दाइलाई वाग्मतीले बगाएर एक जना मानिसले बचाइ दिनु भएको थियो । बागमतिको पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा फरक छ । यसलाई चिर्दै वाग्मतीलाई सफा गरेर कमसेकम नुहाउन योग्य बनाउन लागेका हौं । यो हाम्रो मेहनतबाट वाग्मतीले पूनर्जीवन पाउन गाह्रो भएपनि अलि सुन्दर र सफा भने पक्कै देखिने छ ।
वाग्मती सफाइ अभियानमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणि पौडेल लाग्नुको पछाडि ?
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको मुख्य काम जनशक्तिलाई परिचालीत गर्ने हो । वाग्मतीको विषयमा आएका हरेक प्रस्तावहरूलाई सरकारसम्म लैजाने काम उहाँको हो । लिलामणि पौडेलले आफ्नो जिम्मेवारी वहन पनि गरिरहुन भएको छ । तर पौडेलले गर्नु भएको कार्य प्रयाप्त भने छैन ।
वाग्मती किनारमा अतिक्रमण गरेर बसेका बस्तीलाई वास्तविक सुकुम्बासी हो भने वैकल्पिक व्यवस्थापन र जर्वजस्ती बस्नेलाई हटाउन मुख्य सचिव पौडेलले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ । यस्ता कार्यहरू गर्न जरूरी छ भनेर सरकारलाई प्रस्ताव पेस गरेर निर्णय गर्दिएको भए स्थायीत्व हुन्थ्यो । तर उहाँले गरेको कतिपय कार्यको गति ‘क्षणिक पुण्यम् मत्र्यलोकम विसन्ति’ जस्तो भएको छ । यस्तो हुनु राम्रो होइन ।
नामिविया भन्ने देशमा ढलका पानीहरूलाई पनि पुन शुद्ध बनाएर प्रयोग गरिएको छ । तर हाम्रो वाग्मतीमा भएको पानीमा पनि ढल मिसाइएको छ । यस्तो अवस्थामा ढलको व्यवस्थापन नगरी वाग्मती सफा हुन्छ ?
हामी अन्य विकसित मुलुकहरू भन्दा निकै पछाडी भएकाले हाम्रो सोचमा पनि विकास हुन सकेको छैन । अन्य धेरै मुलुकमा ढलको पानी शुद्ध गरेर पुन प्रयोगमा ल्याएको थाहा भएतापनि हामीले ढलको पानी सफा गर्न सकिएछ भनेपनि त्यस पानीलाई हामीले स्विकार गर्न सक्दैनौ । किनकी हाम्रो संस्कृति नै यस्तै खालको छ । नेपालमा पनि ढलको पानी सुद्ध गर्न ट्रिटमेन्ट प्लान वाग्मतीको कार्यालय नजिक काम भइरहेको छ । त्यसको क्षमता नपुगेकाले नयाँ पनि बनाएको छ । पानी शुद्ध गर्नको लागि मेशिनहरू निरन्तर चल्नुपर्ने र लोडसेडिङ्को समस्याले गर्दा पनि यस कार्य सोचे जस्तो एवं सहज रूपमा हुन सकेको छैन । सवै जनाले कम्तिमा पनि पशुपति मन्दिर क्षेत्रसम्म ढलमुक्त भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् ।
वाग्मती सफाई अभियानमामात्र हैन अन्य कार्यहरूमा पनि हाम्रा जिम्मेवार निकायहरूको जवाफ देहिता पुगेको छैन । सरकारको जिम्मेवार निकायले समयमा नै गुणस्तरीय काम प्रक्रिया सुरू भयो भने परिवर्तन पक्कै सम्भव छ ।
वाग्मती सफाइ अभियानका समस्या तथा चुनौतीहरू केके हुन् ?
सवैलाई थाहा भएकै कुरा लालपुर्जा भएपछि जग्गा तथा घरको आधिकारीक व्यक्ति हुन्छ । वि.सं.२०४२ सालमा नापी गरेरर बदमासी गर्नेहरूले सरकारी सम्पत्तिलाई आफ्नो नाममा राखेको देखिन्छ । यसमा हाम्रै सरकारी निकाय मालपोतले लालपुर्जा दिएर लापर्वाह गरेको थियो । तर त्यो वेलाका धनिले अहिले नयाँ व्यक्तिलाई वेचेपछि नयाँ व्यक्ति अप्ठेरोमा परेका छन् । वाग्मतीको किनारमा रहेका लालपुर्जा हुने र नहुने दुवैलाई हटाउन भनेपछि उनिहरू माथि अन्याय भएको हो । किनकी जसले पछि किनेको छ उसलाई सवै कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ । यो हाम्रो चुनौतीको विषय बनेको छ । पानीको बहाव र अतिक्रमण भएको जग्गाहरूको संरक्षण नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।
अर्को समस्या भनेको सरकारले खोला २० मिटर भनेर छुट्याउन खोजेको छ । तर खोला कोहि सय मिटर हुन्छिन् त कोहि सेती नदी जस्ती हुनेहुनाले खोला तोकिएको दुरीमा बग्दिनन् । बागमतीको सम्पत्ति जोगाउनका लागि रेखाङ्कन गरेर अतिक्रमण हुनबाट बचाउनु पर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने वाग्मतीको सम्पत्ति बचाउन सकेको खण्डमामात्र वाग्मती नदी वाग्मती जस्तो हुन्छिन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष तपाई हामी जती नै कराए पनि जती नै वाग्मतीलाई माया गरेपनि पानी छैन भने नदी नहुने भएकाले यस कार्यको लागि अधिकार सम्पन्न एउटा समिति हुन जरूरी छ । त्यसैले वाग्मतीको पानीलाई अरू ढंगले शोषण गर्नु हुँदैन । वाग्मतीलाई शोषण गरेर काठमाडौंलाई कंक्रिटको शहर हामीले नै बनाएका हौं । हामी यसमा सचेत हुन जरूरी छ ।
वाग्मती सफाई अभियानको भन्द पनि नीतिमा कडाइ गरेर विकास गर्नु पर्ने होइन ?
वाग्मती सफाइ अभियानका समस्याहरू शतप्रतिशत समाधान हुन असम्भव जस्तै हुन्छ । हाम्रो पुर्खाले खोजे जस्तो वाग्मती बनाउन नसके पनि प्रदुषण मुक्त वाग्मती, अलि वहाव भएको र अतिक्रमण नभएको वाग्मती बनाउनको लागि हामी सवैले पहल गर्नुपर्छ । बाटोको वारी र पारी चोभारसम्म बाटो विस्तार गरेर व्यवस्थित गरेको वाग्मती, हरेक ठाउँमा स्थानीय संघ संस्थाहरूले तथा मानिसहरूले अपनत्वको जिम्मेवारी प्राप्त गरे भने वाग्मतीको अहिलेको समस्याहरू न्युूनिकरणको लागि सहयोग पुग्छ ।
्जवर्जस्त नगरिकन फरक तरिकाले नीतिमा कडाइ गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा वाग्मतीको समस्या समाधान हुन सहज हुन्छ । यसका लागि आमनागरिकहरूले सरकारलाई शान्तिपूर्ण दवाव दिन आवश्यक पनि छ ।